China 16oz iglasi yokusela iMason Jar kunye nabaxhasi | IHoyer
Kuwo onke amaqela akho kunye neminyhadala. Zingasetyenziswa njengezipho ngeentsuku zokuzalwa, zokukhumbula, zemitshato, zemibhiyozo, njl njl. Ephephe ngokufanelekileyo kwibhokisi yezothutho; Qiniseka ukuba ucoca ngaphambi kokusebenzisa, njengoko iHoyerGlass igcwalisa iiodolo ezithunyelwa ngqo kwindawo yokugcina impahla yomenzi
Ukuphakama: 133mm / 5.25 intshi
Ububanzi: 105 * 79mm / 4.13 * 3.1 intshi
Iplastikhi yeflash enemigangatho emibini kunye nezibambo kunye netrim emboss - i-16.5 iikomityi ze-oz
Ilungele izixhobo eziqhelekileyo zokuzonwabisa-i-BBQ, amaqela abucala, imisitho yomtshato kunye nezinye iimeko zeqabane elisemagqabini lesiselo.
Izibambo ezomeleleyo zibonelela ngokubamba okuhle; Isentloko esentloko sinokutywinwa ngesiciko se-mason kunye ne-spherical jar, (ayifakwanga) kwisitoreji esinqabileyo
Isimahla. BPA Isimahla, ihlala ixesha elide kwaye kulula ukuyicoca.
Yonwabele isiselo sakho kweyona glasi ikhululekileyo nesemagqabini ye-100%.
Nokuba ungumnini wehiphu kwibhloko okanye indlu yakho ifuna indlela yokuphila ngeendlela ezininzi, le Mason Jar yeyokugqibelela kokuhombisa kwakho. Yizalise ngeziselo, imihlobiso, ii-appetizer - nantoni na. Ngala makomityi aphefumlelweyo, unokuguqula nayiphi na ingcinga oyifunayo ibe yeyokwenyani.
Ubungakanani Umthamo: 455 ml Ukuphakama: 13,3 cm Ubungakanani: 10,5 * 7.9 cm Umthamo: 16 oz H: I-5.25 intshi Ubungakanani: 4.13 * 3.1 intshi
Umbala Sula iglasi ye-super-flint Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
Edlulileyo: Iibhotile zamanzi zeglasi ezili-18oz zeZiselo kunye neJuzi zisebenzisa ubuNtsimbi obunobungqina bobuchwephesha obunobungqina bokuthwala.
Okulandelayo: I-cosmetic Cream Lotion Glass yeebhotile zeJamani ngePP Liner
ibhotile yokusela iglasi
imbiza yokugqobhoza ngesiphatho
I-100ml ejikeleze iGlasi yokutsala ibhotile yeGlasi yobisi lweBhotile ...